सार्वजनिक यातायात भन्दा सुरक्षित तरिकाले... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सार्वजनिक यातायात भन्दा सुरक्षित तरिकाले राइड सेयर गर्न सकिन्छः बस्न्यात
चैतको दोस्रो हप्तादेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ। असार १ गते देखि लकडाउन खुकुलो भएपछि जोर बिजोर प्रणली अनुसार नीजि सवारी साधन चलेका छन्।
कार्यालय खुलेपनि सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा नीजि सवारी नभएका दैनिक कामकाजी व्यक्तीहरु हिडेर वा लिफ्ट मागेर काममा जान बाध्य छन्।
राजधानीमा राइडसेयरको सेवा दिइरहेका चल्तीका कम्पनीहरुले हालसम्म सेवा सुरु गरेका छैनन्।
यो महामारीको अवस्थामा राइड सेयर संचालनको सम्भावना, फाइदा र आवस्यकता लगायतको विषयमा सेतोपाटीका सुधिर भण्डारीले पठाओका क्षेत्रिय निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातसगँ गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राइड सेयर बन्द भए पछि क–कसलाई असर परेको छ ?
सबै भन्दा ठुलो असर त हाम्रा राइडर र ट्याक्सी चालकहरुलाई नै परिरहेको छ। उहाँहरुले ३ महिनादेखि केही आम्दानी गर्न सक्नु भएको छैन। त्यस्तै अफिस जानु पर्नेहरुलाई पनि धेरै सकस भएको रहेछ।
जोर बिजोर प्रणाली छ, सार्वजनिक सवारीसाधन चलेको छैन राइड सेयरिङ कहिले खोल्ने भनेर मलाई धेरै व्यक्ती तथा संस्थाको फोन र इमेल आउने गरेको छ। यो अवस्था लम्बिए हाम्रो आफ्नै स्टाफहरुलाई पनि सेवा सुविधा दिन नसकिने पो हो की भन्ने डर छ।
यस्तो महामारी को अवस्थामा राइड सेयर गर्न सकिन्छ त ?
सकिन्छ। राम्रोसगँ प्रोटोकल मिलायो भने सार्वजनिक यातायात भन्दा सहज र सुरक्षित तरिकाले चलाउन सकिन्छ।
कस्ता प्रोटोकोल अपनाउने बिचार छ ?
सबैभन्दा पहिले त हामीले साइडरलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि राइडरलाई प्रोटेक्टिभ कपडा, स्यानिटाइजर, माक्स प्रदान गरेर उहाँहरुलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। त्यसपछि प्यासेन्जरलाई सुरक्षित बनाउन राइडरले प्रत्यक राइड पछि सिट, ह्याण्डल, शरिरका केही भाग स्यानिटाइज गरेर मात्र अर्को राइड लिने हो भने त्यसले पनि जोखिम धेरै नियन्त्रण गर्छ।
त्यस्तै मास्क नलगाएका प्यासेन्जरलाई नबोक्ने, राइड लिनुभन्दा पहिले प्यासेन्जरलाई स्यानिटाइज गर्ने लगायत विषयमा हामीले बिचार गरिरहेका छौ। त्यसैगरी अलिपछि हामीले बाइक स्यानिटाइज टनेलको बारेमा पनि रिसर्च गरिरहेका छौ। त्यस्तै हामीले विमाको पनि रिसर्च गरिरहेका र्छौ। पुरै थिर्न नसकेपनि आदा प्रिमियम तिरेर काम गर्न सकिन्छ की भन्ने बिचार गरिरहेका छौ।
केही ट्याक्सी चलेका छन्, सार्वजनिक यातायात पनि चलाउने तयारी चल्दै छ। कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात ठिक की राइड सेयर ?
अहिलेसम्म सबै हल्ला मात्रै हो। सार्वजनि यातायातले साविकको भाडा दरमा चलाउन नसक्ने भन्ने पनि हल्ला छ। यो हल्ला ठिक हो भने सार्वजनिक यातायातको शुल्क पनि साइड सेयरकै हाराहामीमा हुन आउछ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा संक्रमणको जोखिम पनि धेरै हुन्छ किन भने सार्वजनिक यातायातमा प्रत्यक यात्रु पिच्छे सिट सेनिटाइज गर्न सम्भव हुदैन। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा चढेको कसैलाइ्र्र कोरोना देखियो भने उनीहरु काहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन कठिन छ। तर हामी प्रत्यक यात्रुलाई सम्पर्क गर्न सक्छै।
पठाओको ५० हजार भन्दा धेरै राइडर, ६ हजार ट्याक्सी र ९ लाखको हाराहारी प्यासेन्जर छन्। उनीहरुको फोन चाहीँ कत्तिको आइरहेको छ ?
हामीले कल सेन्टरमा फोन उठाउन भ्याउनै छोडेर अहिले कलसेन्टर बन्द जस्तै छ। किनभने उहाँहरुले दुखेसो पोख्नुहुन्छ त्यो दुखेसो सुनेर पनि अहिले केही गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौ।
हामीले फोन नउठाएपछि राइडरहरु असार १ पछि बुझ्न अफिस अगाडि नै पनि आउनु भयो। हामीलाई राइड सेयर खोल्न दबाब चाही‌ छ। खोल्यौ भने सरकारी निकायले थाहा पनि पाउँदैन होला तर हामी जिम्मेवार कम्पनी भएको कारणले राइडर र प्यासेन्जर दुबैलाई बचाउने र सरकारसगँ पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो कोशिस हो।
सरकारले इजाजत दियो भने एकैपटक सबै राइड सुरु गर्नु हुन्छ की क्रमिक रुपमा गर्नुहुन्छ ?
हामी पहिलो चरणमा सिमित राइडर बाट राइड सुरु गछौ। पहिले देखि फुलटाइम राइड लिइरहनु भएका, प्यासेन्जरबाट मेजर कम्प्लेन नआएका, राइडर रेटिङ अब्बल भएका सिमित राइडर हरुबाट सुरु गर्ने तयारी छ।
किनभने हामीले दिएको प्रोटेक्भि सुटबाट सजिलै राइडर हो भनेर चिन्न सकिन्छ। बदमासी गरेर अफलाइन ट्रिप लिएर उक्त प्यासेन्जरलाइ्र्र संक्रमण रहेछ भने राइडर हुदै त धेरैलाई संक्रमणको जोखिम भयो। त्यसकारण उहाँहरुलाइ्र्र प्राथमिकता दिन्छौ। त्यसपछि साना साना कुरामा स्पेन्ड भएकाहरुलाई प्राथमिकता दिन्छौ। त्यसरी क्रमबद्ध रुपमा सुरु गर्ने सोच छ।
कती जानाबाट सुरु गर्नु हुन्छ ?
पहिलो चरणमा २ सयबाट सुरु गरेर ५ सय, एक हजार हुनै सुरु गर्छौ।
पठाओका कस्टमरले पहिलेकै शुल्कमा सेवा लिन पाउछन् की शुल्क बढ्छ?
मूल्यमा परिवर्तन गर्ने कुनै प्लान गरेका छैनौ तर सरकारले मास्क ग्लब्स अनिवार्य वितरण गर्नुपर्छ भन्यो भने अलिकती बढ्न सक्छ।
यो जोखिमको समयमा राइडरहरुको कमिसनको बारेमा केही सोच्नुभएको छ ?
हामीले राइडरलाई दिनुपर्ने इन्स्योरेन्सदेखि सुट, स्यानिटाइजर दिन्छौ। त्यो आर्थिक भार कम्पनीकै हो। यो आर्थिक भार र यो ३ महिनाको अवधीमा कम्पनीको खर्चको कारणले कमिसन घटाउन सक्दैनौ होला तर लकडाउनमा को अवधीमा लेलको भाउ घटेको छ, यसले राइडरलाई सहुलियत चाहीँ हुन्छ।
राइड सेयर गर्न अनुमती पाउनुभयो भने कती दिनमा सरु गर्न सक्नुहुन्छ?
सुटहरु ल्याउने, स्यानिटाइजर, मास्क लगायतको तयारी गर्न समय लाग्ने भएकोले हामीले अनुमती पाएको ३ देखि ५ दिन लाग्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १५, २०७७, १४:०८:००